Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Baarkinka | Warshadda Qaadista Baarkinka Shiinaha
Qaadista Gawaarida Gawaarida Gawaarida waxay qaadataa habab wadista hawo-biyoodka, saliida soo saarta hawo-soo-saarka cadaadiska sare waxay ku riixdaa hawo-hayaha si ay u kaxeeyaan guddiga baarkinka gawaarida kor iyo hoosba, ujeedo ujeeddada baarkinka. geli kara ama bixi kara.
4 Parking Lift Parking waa mid ka mid ah wiishka gawaarida ugu caansan macaamiisheenna. Waxay ka tirsan tahay qalabka gawaarida la dhigto, kaas oo ku qalabeysan nidaam koronto lagu xakameeyo. Waxaa wada saldhigga bamka Haydarooliga. Nooca noocan oo kale ah ee wiishka gawaarida la dhigto wuxuu ku habboon yahay baabuurka fudud iyo midka culus.
wo Post Car Lift waxay qaadataa hababka wadista korontada ku shaqeeya, saliidda soo saarta hawo-soo-saarka cadaadiska sarreeya waxay ku riixdaa hawo-hayaha si ay u kaxeeyaan boodhka gawaarida kor iyo hoosba, ujeedo ujeeddada baarkinka. geli karo ama ka bixi karto